ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်: Eran Stern | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်: Eran Stern
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်: Eran Stern
မိမိအစတူဒီယိုထဲမှာ Eran Stern ပာ။ (အရင်းအမြစ်: Natasha Newrock-Stern ပာ)
ထုတ်လွှင့် Beat ရဲ့ "NAB ပြရန် နယူးယောက် Profiles "မှာပါဝင်ပါလိမ့်မည်သူထုတ်လုပ်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ထင်ရှားတဲ့ပညာရှင်များနှင့်အတူအင်တာဗျူးတစ်ခုစီးရီးများမှာ NAB ပြရန် နယူးယောက် (အောက်တိုဘာ 16-17, 2019) ။
ငါမကြာသေးမီကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း၏အပျြောအပါးခဲ့သောဣသရေလဇာတိ Eran Stern ပာ, တာ In-ဝယ်လိုအားဆရာ, စပီကာ, ဂီတပညာရှင်နှင့်ရွေ့လျားမှုဒီဇိုင်းကိုအပေါ်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပြီး ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး Post-ထုတ်လုပ်မှု။ ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာငါ Stern ပာသူ့ကိုယ်ပိုင်စကားသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်ပေးပါစေပါလိမ့်မယ်။ "ကျွန်မအတှေ့အကွုံထက်ပို 25 နှစ်ပေါင်းအတူရွေ့လျားမှုဒီဇိုင်နာဖြစ်၏။ ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်များတွင်ကျွန်မသင်ကြားမှုနှင့်ပညာရေးအခွင့်အာဏာအပေါ်ကိုအာရုံခဲ့ကြရတယ်။ အသက်တာ၌ငါ၏အမက်လုံးပေးအနုပညာနှင့်ဂီတဖြစ်ကြသည်။ ငါသည်လည်းရထားပေါ်တွင်လူကိုစောင့်ကြည့်ကိုချစ်။ "
Stern ပာရဲ့ဂီတအတွက်အတိုးနှင့်အနုပညာအစောပိုင်းအသက်အရွယ်မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။ "ငါသည် Maxi-တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်အ 12s ခေတ်၏အထွတ်အထိပ်မှာ 80 အခါဂီတနှင့်အတူငါ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဇာတ်လမ်းကိုစတင်" ဟုသူကရှင်းပြသည်။ "Record ကိုအဖုံးများထိုကဲ့သို့သောအားအသံတိတ်နှင့် ZTT မှတ်တမ်းများအဖြစ်အထူးသဖြင့်သူတို့အား Indie တံဆိပ်များ, ခေတ်သစ်အနုပညာအဘို့အပြတင်းပေါက်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ငါစံချိန်တင်အဖုံးနှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျဆင်းလို့အယ်လ်ဘမ်ကိုဝယ်ယူသတိရပါ။ အဲရစ်ရဲ့မှာအပေါ်ထပ် [အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံ] တဦးတည်းကြီးမြတ်သာဓကဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ အဲရစ်ရဲ့မှာအပေါ်ထပ် အယ်လ်ဘမ်အဖုံး.
"စာအုပ်တွေနဲ့ရုပ်ရှင်အဘို့ငါ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆွဲထဲကနေလာ၏။ ငါအနှစ်နှင့်တစ်ဦးအလွန်အစောပိုင်းအသက်အရွယ်-5 ကနေဆေးထိုးခြင်းနှင့်အဝိုငျးဝနျးဖို့အသုံးပြုက Stephen King အားဖြင့်အံ့ဩခြင်းနှင့် DC ကကာတွန်းမဂ္ဂဇင်းအားဖြင့်အများအားဖြင့်မှုတ်သွင်းရုပ်ပြတန်ချိန်အဖြစ်ထိတ်လန့်ပုံပြင်များကိုဆွဲငင်။ ဤအဇာတ်လမ်းများရိုက်ကူးဖို့အဆင်ပြေအောင်ကြသောအခါ, ငါသည်နေ့ညဉ့်၎င်းတို့ကိုစောင့်ကြည့်။ ငါ၏အစွဲလောင်စာရန်, ငါစာပေမှလှည် ့. , ဤယခုတိုင်အောင်ဆက်လက်ရှိမယ့်-အဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှသံသရာကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ "
မိမိအအနုပညာအကျိုးစီးပွားပေးထားသောကြောင့် Stern ပာသည်သူ၏ပညာရေးလေ့လာမှုတွေအတွက်အနုပညာအတွက်အဓိကမဟုတ်ခဲ့သင်ယူဖို့အံ့သြစရာပါပဲ။ "ငါ '' အစစ်အမှန် '' ဘဝ၌ငါ့ကိုကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုအချို့သောအလေးအနက်ပညာရေးဆည်းပူးရမယ်ထင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မပထမဦးဆုံးစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဘာသာရပ်ကိုလေ့လာ, ဒါကြောင့်ငါဌာနသို့တစ်ဦး BA ဘွဲ့ရှိသည်။ ထိုအခါမူကားငါမကြိုက်ဘူးခန့်လျော့နည်းဂရုမစိုကျနိုငျသောအရာတစ်ခုခုလုပ်နေတာဒါကြောင့်အဘို့အရောင်းမန်နေဂျာအဖြစ်သရုပ်ဆောင်များ၏ 10 နှစ်ကြာခဲ့ပါတယ်သဘောပေါက် Autodeskကျွန်မရဲ့ဘဝကိုချင့်တွက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်နှင့်ငါ့နှလုံးအတိုင်းလိုက်နာနှင့်ဒီဇိုင်းသင်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ self-ဆုံးမသွန်သင်လူတစ်ဦးအဖြစ်, ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်စတင်ခဲ့ပြီးနှင့်နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး Shenkar အဲဒီမှာနေတဲ့ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းဒီဂရီပြီးဆုံး။ ထိုအခါအကြှနျုပျသရွှေ့လျားရစ်ဖစ်ဦးစီးဌာနဆုံးမဩဝါဒ ပေး. နှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်း 12 နှစ်ပေါင်းရှိနေ၏။ "
Stern ပာသည်သူ၏အနုပညာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းချဉ်းကပ်အဝိုင်းတွင်လမ်းပေးသောကြောင့်ခုနှစ်တွင်သူ၏အကျိုးစီးပွားကိန်းဂဏန်းများ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး ထို့အပြင်တစ်ဦးမဖြစ်နိုင်အရင်းအမြစ်မှလာ၏။ "ဣသရေလအမျိုး၌စစ်တပ်၌ငါ့ဝန်ဆောင်မှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်, တကအကြံပေးအဖွဲ့အတွင်းပိုင်း optical ဂီယာ၏အသုံးပြုမှုကရှင်းပြသည်သောလေ့ကျင့်ရေးဗီဒီယိုကဖန်တီးငါ့တာဝန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါဆေးသုတ်မှလာနှင့်နောက်ခံအရောင်ဆွဲခံခဲ့ရကတည်းကငါမက်ခရိုမီဒီယာဒါရိုက်တာ-ဒီ 1991-နှင့်ဖြစ်ခဲ့သည်တိုတောင်းတဲ့ကာတွန်းရုပ်ရှင်ဖန်တီးအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာဗီဒီယိုပြန် print ထုတ်မယ့်ဧရာမစိန်ခေါ်မှုကြီးနှင့်ကျနော်တို့ကွန်ပျူတာ screen ကိုရိုက်ကူးတက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့်တန်ဖိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါသည်ငါ့ရာထူးရတယ်ကိုလည်းငါသည်ငါ့ဇုန်ကိုတွေ့ဖူးကြောင်းသဘောပေါက်လာတယ်။ အချိန်အားဖြင့်ဝင်အဖြစ်မျှော်လင့်ငါမှာပိုကောင်းလာပြီပေါ့။ "
နောက်ဆုံးတော့ Stern ပာသူ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်, SternFX။ "ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှစ်ခုအဓိကအကြောင်းပြချက်များအတွက်စတင်ခဲ့သည်။ ကထိကအဖြစ်ငါ၏အတိုက်စားမှုအသေးအဖွဲ, ပထမ။ ငါဒီနှုန်းဆက်လက်လျှင်, ငါ့စွမ်းအင်လျင်မြန်စွာထွက်ဝတ်ဆင်မယ်လို့စောစောသဘောပေါက်, ငါမှတ်တမ်းတင်သင့်ကြောင်းအစောပိုင်းထိုးထွင်းသိမြင်ဖို့ကျွန်မကိုဦးဆောင်သည့်ငါဆုံးမဩဝါဒပေးသည့်သင်တန်းများ, ထိနျးသိမျးဖို့လမ်းကိုမြော်လင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမဩဝါဒ ပေး. , ဤသို့စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းရန် နှင့်တတ်နိုင်သမျှလူအတော်များများကလက်လှမ်းစေ။ ဒုတိယအကြောင်းပြချက်နည်းနည်းပိုပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးရှိ၏ ငါအပိုဝင်ငွေကို generate ခဲ့ရသည်။ ကြှနျတေျာ့ဇနီးကင်ဆာတယ်တော့ဘူးအလုပ်လုပ်လို့မရဘူး။ အဆိုပါဘဏ္ဍာရေးတာဝန်တစ်ခုတည်းကိုသာအကြှနျုပျကိုငြိမ်ဝပ်စွာနေ, ငါအိမ်ပြန်ထွက်ခွာခြင်းမရှိဘဲ, ငါကဆဲခဲ့စဉ်ကအခြားလစာအတွက်ရောက်စေဖို့နည်းလမ်းရှာရတယ်။ "
Stern ပာရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွက်လာမယ့်ခြေလှမ်းအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုအပေါ်တစ်ဦးမှသင်တန်းဆရာနဲ့အတိုင်ပင်ခံကဲ့သို့မိမိကိုမိမိရောင်းဖို့ပဲ။ "ငါရိုးရှင်းစွာငါသိတယ်လူတိုင်းကိုငါ့ဥစ္စာကိုကမ်းလှမ်း, ငါအစိမ်းရောင်အလင်းတယ်သည်အထိအနည်းငယ်အစ္စရေး chutzpah အတူငါဒေါသထှကျရဆက်လက်အဓိပ်ပာယျ 'တံခါးဝ၌တစ်ဦးခြေလျင်လာပြီ' '၏နိယာမလျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ အဖြစ်မကြာမီတစ်စုံတစ်ဦးကငါ့ကိုအခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏အဖြစ်ငါအရှိန်အဟုန်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ငါ၏အအနေအထားကိုတည်ထောင်ရန်ငါတတျနိုငျသအရာအားလုံးကိုပြု၏။ တိုတောင်းသောခုနှစ်တွင်မရှိမှော်စာရွက်ကဒီမှာ-တစ်ဦးဇွဲ၏ပေါင်းစပ်အနည်းငယ်ဆက်သွယ်မှုနှင့်အသက်တာ၌အခြားအရာအားလုံးအချို့ကောင်းသောအချိန်ကိုက်နှင့်ကံနှင့်အတူကဲ့သို့ရှိ၏။ ငါ၏အ client များအကြား, ငါသည်အဒစ္စနေး, Weizmann Institute ကများနှင့် Adobe ကအဖြစ်လက်တဆုပ်စာကိုဒေသခံမီဒီယာအေဂျင်စီများ, ထုတ်လွှင့်, နဲ့ post အိမ်များထံမှအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂရပ်ဖစ်အသင်းများကိုအမည်ပေးနိုင်သည်။ "
အဆိုပါ 2019 မှ Stern ပာရဲ့ပံ့ပိုးမှုများ NAB ပြရန် နှစ်ဦးစလုံးစာတိုက် / ထုတ်လုပ်ခြင်းညီလာခံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်တင်ပြပါလိမ့်မည်သည့် "အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ရုပ်ရှင်ရုံ 4D ပြီးနောက်ဖြင့်ရေးစပ်သီ" နှင့်: နယူးယောက်, အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏စုံတွဲတစ်တွဲဖြစ် "စာစီစာရိုက် & ခေါင်းစဉ်ဒီဇိုင်းတွင်အာရုံစိုက်" ပါလိမ့်မယ်။ "ကျနော့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်မှာ NAB ပြရန် တစ်ဦးတက်ရောက်သူအဖြစ် 22 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် 2005 အတွက်ငါ Post ကို / ထုတ်လုပ်ခြင်းကမ္ဘာ့ဖလား conference မှာကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံး session ကိုသင်ပေးတယ်။ အစဉ်မပြတ်ငါဘင် Kozuch, သမ္မတနှင့်ပူးတွဲတည်ထောင်သူမှတ်မိနေလိမ့်မည် အနာဂတ်မီဒီယာ Concepts, အဘယ်သူသည်ငါ့ကိုကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးအခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။ ထိုအချိန်မှစ. ကျွန်မအဖြစ်အပျက်ထုတ်လုပ်သောအဖွဲ့သည်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့နှင့် NAB နှင့်အခြားညီလာခံတစ်ခုတွင်ဟောပြောရန်အတွက်ဆက်လက်ပါတယ်။ NAB ပြရန် အသစ်သောဆက်သွယ်မှုစေနှင့်လက်ရှိကွန်ရက်များအားကောင်းလာစေရန်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာများ၏တဦးတည်းဖြစ်ပြီး, ငါနေဆဲကြောင့်ယခုနှစ်အရေးကြီးဆုံးပြပွဲဖွင့်ယုံကြည်ပါတယ်။
"စာသားမကြာခဏဗီဒီယိုအားစီမံကိန်းများအတွက်အရေးအပါဆုံးဒြပ်စင်ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်အများအပြားဘဝမှအက္ခရာများဆောင်ခဲ့၏ရှုပ်ထွေးလျှော့မတွက်။ ပထမဦးဆုံး session တစ်ခုမှာတော့ကျွန်မစာစီစာရိုက်နှင့်ခေါင်းစဉ်ဒီဇိုင်းအာရုံစိုက်နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုပြီးနောက်အတွက် type ကိုအတူလုပ်ကိုင်ဘို့နည်းစနစ်အမျိုးမျိုးကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။ ငါသည်လည်းရင်သပ်ရှုမောဖွယ်မြင်ကွင်းများကိုဖန်တီးရန်အကျိုးသက်ရောက်မှုပြီးနောက်စာသားနှင့်ဗီဒီယိုပေါင်းစပ်ဖို့ဘယ်လိုပြသပါလိမ့်မယ်။ 3D စာသားကိုလည်းကြီးမားသောအရာဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အလင်း, texture extrude, နှင့်စာသားလှုပ်ရှားပုံများနှင့်အခြား 3D သက်ရောက်မှုနှင့်အတူကပေါင်းစပ်ပါလိမ့်မယ်။ ငါသည်လည်း ligatures, Indent, Kerns, glyphs ဖို့အချိန်မွှုပျနှံပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်ကို double session ကို type ကိုရှင်းလင်းပြသားသောလှပပါစေနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုပြီးနောက်အထဲတွင်လှုပ်ရှားဖို့လိုသူမည်သူမဆိုရန်ရည်ရွယ်သည်။
"ဖွဲ့စည်းမှု session တစ်ခုသည်, ငါသည်တိုးတက်စေရန်ပုံကိုသရုပ်ပြလိမ့်မယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုပြီးနောက်ကနေအနည်းငယ်အကူအညီဖြင့်ရုပ်ရှင်ရုံ 4D ထဲကလာမယ့်ပြန်ဆို။ ဥပမာအားဖြင့်, သငျသညျ, ဒြပ်စင်ကွဲပြားခြားနားဆပ် 'passes နှင့်အတူအလုပ်ခွဲထုတ်တိုက်ယူသည့်စနစ်ကိုအသုံးပြုရန်နှင့်ပင်ကင်မရာများနှင့်အလင်းအိမ်တင်ပို့နိုင်ပါတယ်။ ဤသူသည်သင်တို့အပြောင်းအလဲလုပ်ချင် re-ဆပ်အခါတိုင်းရန်လိုအပ်ကြောင်းမရှိပဲ, post ကိုစင်မြင့်မှာရလဒ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရပါသည်ဖို့ကူညီနိုင်သည်။ ပိုပြီးထိထိရောက်ရောက် post ကိုစင်မြင့်မှာလျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်သက်ရောက်မှုလည်းရှိတယ်။ ဤသင်ခန်းစာကိုလေ့လာဆွေးနွေးခုနှစ်တွင်, သင်သည်သင်၏ရေးစပ်သီတိုးတက်စေခြင်းနှင့်မြန်နှုန်း-အထိနည်းစနစ်အမျိုးမျိုးလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးပြီးနောက်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် C4D အကြားတင်းကျပ်စွာပေါင်းစည်းမှုမှကျေးဇူးတင်စကား။ ဤသင်ခန်းစာကိုလေ့လာဆွေးနွေးပို့စ်တွင်ဗီဒီယိုနှင့် comp က 3D တ္ထုကိုထည့်သွင်းဖို့လိုသူမည်သူမဆိုဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ "
Stern ပာရဲ့အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်ကသူအောက်ပါအတိုင်းအဖြစ်သူ၏ဦးစားပေးဖြစ်ကြောင်းပြောပြတယ်။ "အင်္ဂလိပ်နှင့်ဟီဘရူးနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ပိုပြီး On-line ကိုခေါင်းစဉ်ကိုဖန်တီးပါ။ ညီလာခံ၌သွန်သင်နှင့်ရွေ့လျားမှုဂရပ်ဖစ်နှင့်ဒီဇိုင်းအတွက်သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းလုပ်နေပါတယ်သူတွေကိုကူညီပေးသည်။ တစ်ဦးကောင်းဖခင်နှင့်မိသားစုသည်လူဖြစ်လိမ့်မည်။ ကို run နှင့်ဂီတကိုနားထောင်လျက်, အရေးအကြီးဆုံးကတော့ကျန်းမာဖြစ်, ပြုံးခြင်း, Netflix ဟာအပေါ်မှာငါ့သီချင်းစာရင်းကိုအတူတက်ဖမ်းရန် Continue ။ "
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ 2019 NAB ပြရန် ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း Eran Stern ပာ အနာဂတ်မီဒီယာ Concepts NAB NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB16 nabshow Shenkar SternFX 2019-10-09
ယခင်: NAB နယူးယောက်တွင်စကားပြောရန်ရိုးရှင်းခြင်းနှင့် (၎င်းသည်“ ပျော်စရာကောင်းသည်ဟုထင်မြင်သောအချက်”) နှင့်ကွဲပြားသောအရာ
နောက်တစ်ခု: နယူးယောက်ရှိ NAB Show: FOR-A ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုတွင်နောက်ဆုံးပေါ်မီးမောင်းထိုးပြရန်